Beeraha Makiinado, Isku soo goostay, Corn Isku goostay - Zhonglian
QALABKA BEERAHA CUSUB EE DHAMMAAN BAAHIYAHA AAD
Corn isu geeyo goostay
Looska isu geeyo goostay
Sarreenka / bariis isu geeyo goostay
Zhengzhou Zhonglian Harvest Makiinado Co., Ltd waa shirkadda saarka xirfadle isu geeyo goostay oo midaynaysa cilmi-saarka, dayactir soo saara, complete geynta mashiinka iyo adeeg-sale ka dib markii wax soo saarka. Shirkadda waxaa la aasaasay sanadkii 1995 oo ku yaal bartamaha Zhiji Road ee magaalada Xingyang, Gobolka Henan. Shirkadda daboolayaa ku saabsan 150,000 oo mitir oo laba jibbaaran, iyo in ka badan 500 shaqaale oo ay ku jiraan 56 injineernimada maamulayaasha farsamo iyo 67 farsamo xirfad leh. Wadarta hantida Us gaaro $ 60 malaayiin taas oo ka kooban caasimada ka shaqeeya Us $ 25 malaayiin. The ratting credit shirkadaha gaadhay 2A + ee warshadaha iyo Bank ganacsiga.
Iyadoo technology sida asaasiga ah, horumarinta iyo soo saaraan alaabta oo tayo sare leh sida ay baahiyaha kala duwan ee suuqa.